SAWIRKA MADAXWAYNAHA: ”Sawirkani ma buuxinayo calool baahan!” – Farqiga u dhexeeya laba sheeko oo ka kala dhacay Hargaysa & Baqdaad | Hadalsame Media
Home Maqaallada SAWIRKA MADAXWAYNAHA: ”Sawirkani ma buuxinayo calool baahan!” – Farqiga u dhexeeya laba...
(Hadalsame) 08 Agoosto 2020 – Raysal Wasaarihii hore ee dalka Ciraaq, Cabdikariim Qaasim, ayaa toddobaadkiiba mar booqan jiray moofooyinka roodhida lagu sameeyo ee magaalada Baqdaad.
Maalin maalmaha ka mid ah ayuu arkay moofo samaynaysa roodhi ka yaryar roodhida moofooyinka magaaladu sameeyaan, isla markaana gidaarka qolka roodhida lagu iibiyona sawirkiisa oo aad u weyni sudhan yahay.
Raysal Wasaarihii oo aad u yaabban baa ku yidhi ninkii moofada lahaa: ”Walaal waa in aad sawirkaygan yaraysaa, roodhida aad dadka ka iibinaysana waaweynaysiisaa, sababtoo ah taswiirtaydani ma buuxinayso caloosha dadka baahan ee aan hoggaamiyaha u ahay.”
Dhacadadan waxan xasuustay dharaar dhowayd oo aan afar xafiis oo dawladda ah, oo ay hawlo igaga xidhnaayeen tegay, oo sawirka madaxweynaha oo la qurxiyay gidaarrada xafiisyada ku sawiran yahay.
Weli se maan fahmin xigmada ku jirta in sawirka madaxweynaha gidaarka xafiiska lagu dhejisto.
Previous articleDayuuradda Kenya Airways oo hakisay duullimaadyadii ay ku iman jirtey Muqdisho (DF Somalia oo damacsan arrin kale)
Next articleSaldhigga tareennada ugu casrisan Roma oo loogu magac darayo halgamaa Soomaali-Talyaani ah & waxa uu ahaa + Sawirro